Kudyidzana muBhizinesi, Izvo zvazviri, Kubatsira uye Kukanganisa
Chii chinonzi kudyidzana kwebhizinesi uye ndezvipi zvakanakira nekuipira? Kudyidzana kuripo kana paine varidzi vanopfuura mumwe webhizinesi, uye iro bhizinesi harina kuiswa kana kurongeka sekambani inezvikwereti. Ivo vadyidzani vanogovana mubatsiro, kurasikirwa, uye zvikwereti. Ivo vadyidzani vanogona kuve vanhu vamwe, makambani, matrust, kumwe kudyidzana, kana chero musanganiswa weiyi mienzaniso. Kumwe kwekukanganisa kukuru ndekwekuti varidzi vane chikwereti chisingagumi kune ese zvikwereti zviri pamutemo nezvisungo zvekambani. Pamusoro pezvo, mumwe nemumwe wevabatsiri anoita semumiriri, uye nekudaro, anogona kumisikidza kambani kuzvisungo zvisina mvumo yevamwe vadyidzani. Mhosva inokonzereswa nemumwe mudiwa inosiya vese vadikani vari panjodzi kumatare edzimhosva. Iko mutero mabhenefiti haana kukosha sekuita nekambani. Bhizinesi mari uye kurasikirwa zvinotaurwa pane yega mutero unodzoka wevaridzi.
Kudyidzana kunowanzo shandiswa kana vaviri kana vanopfuura varidzi vachida kutora chikamu mukuita kwezuva nezuva kwebhizinesi. Iyo kudyidzana inotanga nekukurumidza kana bhizinesi zviitiko zvatanga nemumwe munhu, aine kana pasina chero mapepa ari kuzadzikiswa. Kunyangwe hazvo mutemo usingade, vazhinji vanobatana vanogadzira chibvumirano chekudyidzana chakanyorwa kuratidza mashandisiro avachaita bhizinesi. Chibvumirano ichi chinofanira zvakare kutaura kuti mhindu uye kurasikirwa kunofanira kugoverwa sei. Kana chibvumirano chakanyorwa chisina kugadzirwa, saka mitemo yekudyidzana yenyika yako ichatonga kudyidzana. Kugadzira chibvumirano ichi kunopa mukana kune vanobatsirana mukana wekutsanangura zvakajeka zvavanotarisira kune mumwe nemumwe.
Kudyidzana kunotendera purofiti yebhizinesi uye kurasikirwa kuti zvitaurwe pane yega mutero inodzoka yemuridzi wega wega. Iko kusimba kwega kweumwe neumwe mudiwa kunogona kunyatso kuiswa kushanda munzvimbo dzekutarisira uye dzemari. Kudyidzana kuri nyore kugadzirisa. Nguva iyo mapato maviri kana anopfuura anotanga kuita bhizinesi, kudyidzana kunotanga. Iko kune kushoma kwemapepa uye zvinodiwa pamutemo zvinotarisirwa kutanga mubatanidzwa. Matunhu mazhinji anokurudzira chibvumirano chekudyidzana kunyorwa, uye marezinesi ebhizinesi anodiwa nezvitupa kuti zviwanikwe.
Kuyerera kuburikidza nemitero
Matarenda uye kusimba kwemumwe nemumwe wako zvinogona kushandiswa zvakanyanya
Mapepa mashoma uye kurambidzwa zviri pamutemo
Kusiyana nekambani kana kambani inezvikwereti, varidzi vemubatanidzwa vane chikwereti chisingagumi. Izvi zvinoreva kuti kana bhizinesi rakamhan'arirwa, vakweretesi vanogona kuenda kunotevera chero chavanowana chivakwa uye midziyo kugutsa zvikwereti. Kune zvekare nyaya yekuti muridzi wega wega anoita seanoshanda kukambani. Semumiriri wekambani, mumwe nemumwe anogona kuunza chikwereti. Kana tsaona ikaitika nemumwe mudiwa panguva yekuitisa bhizinesi, vese vadyidzani vane mvumo zvakaenzana. Uku kukanganisa kukuru kunoenzaniswa nekambani. Izvi zvinoreva kuti kana bhizinesi rakamhan'arwa, zvisinei nekuti ndeupi wevadyidzani akagadzira chikwereti, vese kana vese vadyidzani vanogona kurasikirwa neimba yavo, mota, kuchengetedza uye zvimwe zvinhu. Vamiririri vekambani zvakare vanokwanisa kupinda muzvibvumirano zvepamutemo uye zvisungo vasina kutanga vawana mvumo kubva kune vamwe vadyidzani. Muchiitiko apo chibvumirano chakanyorwa chisati chaitwa, kudyidzana kwaizorega kuvapo.
Vabatsiri vane chikwereti chisingagumi maererano nezvikwereti nezvikwereti zvebhizinesi
Mumwe mudiwa anogona kukonzera vese vadyidzani kutambura kurasikirwa kwebhizinesi uye zvemunhu zvinhu
Pasina kuronga mberi, kambani yakagumiswa parufu rweumwe wake
Sarudzo yemumwe mudiwa pamwe kana asina kupihwa mvumo kubva kune vamwe vaviri inogona kumanikidza bhizinesi.
Kugona kugona kusimudzira mari
85% yehukama hwehukama hunoputsika mukati megore rekutanga
Iko kudyidzana kwakanyanya kufanana neiyo yega proprietorship modhi yebhizinesi. Kudyidzana kuri kuita kwega kwega kune varidzi vanopfuura mumwe. Ose ari maviri anoyerera kuburikidza nemitero, pamwe nemutemo wakatemwa uye kuongororwa. Zvese zviri zviviri zviri nyore kutanga, uye kupera. Imba yepamusorosoro uye kudyidzana zvinogoverana musiyano unokatyamadza wekutendera chikwereti chisingagumi kune zvikwereti uye zvisungo zvekambani. Ose maviri marudzi ebhizinesi ane akaganhurirwa kwenguva. Ivo vaviri vanogovana mumatambudziko anowanikwa mukuedza kutsvaga mari. Kungwarira kukuru kunofanira kushandiswa nekuti mhosva inopokana nekubatana inogona kukonzera kubatwa kweazvino uye zvemberi zvinhu. Makambani nemakambani anezvikwereti zvishoma, kune rimwe divi, ane zvigadzirwa zvemutemo zvekudzivirira varidzi kubva kumatare ebhizinesi.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 27, 2017